Yintoni ongayinika umtshato weparele?
Iminyaka engama-30 yokuhlala kunye kunye nexesha apho ixesha lesibini lolutsha luza kulwalamano. Ngalesi sikhathi abantwana sele bekhulile, umsebenzi wakhiwe, kwaye izicwangciso zobomi eziphambili zenzeke ngokuqinisekileyo. Yaye yintoni umtshato weparele oya kuhamba ngaphandle kokuzonwabisa kwaye uyavuyisana! Ukuba ngaba abazali banomdla wokugubha ngokukhawuleza, qwa lasela izipho kwangaphambili. Zingaba luncedo okanye zithandana, zinobugcisa okanye zemveli.
Umtshato wePearl: Yintoni onokunika abazali?
Uyavuma ukuba yonke le minyaka engamashumi amathathu le mbini ihlala, ihlala isebenza ngenhlalakahle yentsapho, kwaye ikhulise abantwana. Ngoko mhlawumbi isipho sokuqala somtshato weparele siya kuba yi-voucher ebini kwisiqithi esingaphandle okanye uhambo lweendawo ezidumileyo eYurophu? Uvale umhlaba ngaphambi: funda ngesimo sengqondo sabazali ukuphumla ekutyeni okanye usebenze ngeendlela ezininzi. Ukuba uhambo oluya phesheya aluhambisani kakuhle, unokubongoza ukuba uhambo oluya kwiziko lezonyango okanye kwi-resort resort. Ukuphumla kwabazali kuyisipho esifanelekileyo kubantwana.
Izipho zomtshato weparele kubazali zingasebenza. Kungenzeka ukuba lixesha lokuthenga i-TV entsha okanye isitofu. Ukuba abazali bayabathanda, unokubakhombisa ngomzobo okanye umzobo womculi odumileyo. Unokwenza i-poster yakho kunye nokumema zonke iindwendwe ukubhala apho.
Into ecacileyo kukuba ukunika umtshato weperile, yizinto zokugqoka. Kuba umfazi, ukhetho lweentsimbi, iigraceti, amacici kunye neeparele zikhulu kakhulu. Ukuba imali ivumelekile, unokukhetha iiparele zendalo. Kwibini ukucinga iicufflinks kwiiparele. Liza kubonakala lifanekisane kwaye litshintshi. Endaweni yeekotlinks, unokukhangela i-tie clip.
Ukuba kungekudala umtshato weparele, kwaye awukwazi ukuba uyinike abazali bakho, ulungiselele ieholide. Ukuba lixesha elifudumele lomnyaka, unokuthatha wonke umntu ngaphandle kwedolophu okanye urente indlu enxweme. Ngexesha elipholileyo, unokubhiyozela isikhumbuzo kwisibhakabhaka esilungileyo. Ukuba abazali bathanda izipho zothando, banika ikhadi levidiyo okanye bawubone umtshato womtshato weperile. Ukumangalisa ngokwenene kuya kuba yingubo yomtshato kunye ne-tuxedo yokuqesha!
Isipho esihle kakhulu siza kuba ngumfanekiso wesibini esitshatileyo, esenziwe ukuba siyi-oda. Ukuba isalathisi sikhululekile, unokwenza umzobo onobungane. Oku kuyanconywa ngabantu abathandayo. Ukuzihlaziya okanye ukuthandana nomtshato kungenziwa kwimveliso ye-confectionery - ikhekhe elikhulu elinomfanekiso weeparele okanye ngamanani omtshato ngokuqinisekileyo uya kukukholisa "abasanda kutshata".
Yintoni enokuyinika umtshato weperele kubahlobo?
Ukuba ude wazi kwaye uyayazi ukunqwenela kwabahlobo kakuhle, unako ukubanika isitya se-chic okanye izitya zelinen. Ukuba uyazi imeko yendlu kwaye unokubona kwangaphambili indlela abatshatileyo abazenze ngayo, zama ukufumana iifestile zeplastiki, imizobo okanye ezinye izinto zokuhlobisa kwigumbi lokulala okanye igumbi lokulala.
Kwezinye iimeko, izixhobo zendlu ziya kwenza. Ngokwesiko, banikwa abenzi bezonka , ii-oven microwaves. Unokukhetha isethi yokusika. Okugqithiseleyo yizinto ezikhunjulwayo okanye izinto ezenziwa ngumama-pearl: izifaniso, iigolane zeembombo, izibane okanye izinto ezintle.
Kungenzeka ukuba isibini esithile siphupha ixesha elide liphupha isilwanyana. Ukuba unquma ukuhlala kule nguqulo yesipho, xubusha kwangaphambili. Ngokuqhelekileyo kulo xesha, izibini ezitshatileyo ziqala ukubandakanya kwi-dacha. Njengoko isipho, unako ukuvelisa umtshini wokhuni okanye umyezo wegadi. Unokunika nesitulo sokugungqa okanye ukujikeleza kwintsimi.
Ukubhiyozela umkhosi womtshato iminyaka emi-5?
Yintoni enokumnika umntwana iminyaka engama-6?
Yintoni ongayinika umhlobo iminyaka engama-35?
Unyaka omtsha we-Thematic
Ukubhiyozela usuku lokuzalwa kwindalo ehlobo?
I-Apple igcinwe - imbali yeeholide
Yintoni enokunika indoda endala?
Usuku lwama polisa aseBelarusian
Iingcebiso Zemihla yoLuku loTitshala
Isipho entloko yakhe yokuzalwa
Yenzani i roses ephuzi?
Usuku LweSwekile Swesigxina
Imyuziyam yeMbali yeRiga kunye nokuHlola
I-Epilator kunye ne-depilatory - umahluko
I-Ammonia yotywala - sicelo
Indlela yokuchonga ngesondo somntwana etafileni yeVanga?
Ukulungele ukunciphisa umzimba
Umntwana akaphenduki kwiinyanga ezi-5
Amaphepha e-Wall "ibhuloho"
Umfazi kaJamie Dornan wacaphukisa iindlebe zokukhulelwa
Iimveliso ezincedo kumazinyo
Kuthetha ukuphucula umkhuhlane kubantu abadala
Indlela yokuqoqa imbewu yeepilisi ekhaya?
Yintoni ongenakuyithetha kumadoda elele?
Imidlalo yabantwana abancinci